EyeThupha 13, 2018 admin
Bitcoin izinga lokuqaqamba hits 50% ngokuba okokuqala 2018
Ngoku Bitcoin yenza phezulu 50 ekhulwini yonke capitalisation kwimarike cryptocurrency. Ngo August 11, CoinMarketCap kaThixo izinga lokuqaqamba Bitcoin - ngesalathisi ukuba umkhondo pesenti lilonke capitalisation kwimarike cryptocurrency ezinikelwe cryptocurrency phambili - kufikelelwe 50 ekhulwini okokuqala ukusukela ngoDisemba 19, 2017.
Ngexesha press, Ngoku capitalisation market Bitcoin ngayo iirekhodi $105,785,552,545, okuyinto mayelana $901 million ngaphezulu kwe olusisiseko lwe zonke ezinye cryptocurrency edityanisiweyo. ukukhonya Izinga Bitcoin kaThixo ibe phezu uyithobele okuqhubekayo kule nyanga zimbalwa zidlulileyo, esimelela manje 14 ukwanda ekhulwini ukususela ngoMeyi 1st. Ekuhambeni kwexesha xesha linye ukukhonya lentengiso zonke ezinye cryptocurrencies ziwe phezu ukwehla.
Ingxelo Daily Market Kraken for 12.08.2018
$92.2M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje